8 सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा विचारहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा यू.एस.ए. > 8 सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा विचारहरू
यस वर्ष तपाईंसँग विश्वका आश्चर्यका बारे अन्वेषण गर्ने मौका छ किनकि यात्रा नियमहरू अनुकूल बनाइन्छ. पहिले छुटेका बिदाका गन्तव्यहरू बिस्तारै बिस्तारै पुन: खुल्दै छन् किनकि विश्व महामारीको साथ बस्न मिलाउँछ. यहाँ पनि 8 सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा यात्रा मा 2021 तपाईंले विचार गर्नु पर्छ.
ट्रेन यात्रा गतिशीलताको सबैभन्दा वातावरणीय अनुकूल रूप हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र द्वारा गरिएको थियो एक ट्रेन सेव, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
1. केप कोड
यो क्षेत्र पूर्वी म्यासाचुसेट्समा अवस्थित छ र पूर्वी तटमा सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको क्षेत्रहरू मध्ये एक हो. मा 2021, यो अझै पनि उत्कृष्ट जन्मदिन यात्रा गन्तव्य मध्ये एक को रूप मा चार्ट मा माथि छ. यस क्षेत्र सहित तपाईलाई हेर्नको लागि त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् सुन्दर तटहरू, पार्क, ऐतिहासिक लाइटहाउसहरू, र प्राकृतिक मनोरन्जन को एक धेरै. जब तपाईं यस शहरको भ्रमण गर्नुहुन्छ, यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँ सुरक्षित आवास खोज्नु हुन्छ. छुट्टी भाडा सबै भन्दा राम्रो विकल्प बनाउन यो जब यो आउँछ. बचे पनि होटलको कोठामा बस्नुभन्दा, तपाईं धेरै र विलासी केप कोडमा एकमा रहन रोज्न सक्नुहुन्छ छुट्टी भाडा. यसले तपाईंलाई घर जस्तो अनुभूति दिनेछ किनकि तपाईंसँग भान्साकोठा र लुगा धुने कोठा र यन्त्रहरू जस्ता सुविधाहरूमा पहुँच हुनेछ। HVAC उपकरणहरू. यो विशेष गरी जब उपयोगी मा आउँछ परिवार संग यात्रा जस्तो कि तपाईलाई हार्दिक खाना बनाउने र तपाईंको बसाईको बखत सफा गर्ने मौका हुनेछ. साथै, होटलको तुलनामा छुट्टी भाडामा गोपनीयताको केही अंश छ.
2. सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा यात्रा मा 2021: अलास्का
भौगोलिक रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट अलग भए पनि, अलास्का भ्रमण गर्ने सब भन्दा मनमोहक र दर्शनीय ठाउँहरू मध्ये एक हो. बच्चाहरूका साथ स्की छुट्टीको लागि यो जन्मदिनको गन्तव्य हो. जब तपाईं देशको यो भागमा जानुहुन्छ, तपाईं टाढाको हिमनदीहरू देख्नुहुनेछ, उचाइ पहाडहरु, राजसी मूस, 12फिट अग्लो भालुहरू, र सुनसान तटवर्ती ठाउँहरू. शीर्ष ठाउँहरू मध्ये जुन तपाईं अलास्कामा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ डेनाली राष्ट्रिय निकुञ्ज हो, जहाँ तपाईं भालुहरू देख्नुहुनेछ, ब्वाँसोहरू, र मुस. तपाइँले श्याभज नदीको साथ हिड्ने मौका पनि पाउनुहुनेछ किनकि तपाइँ स्थिर पानीको प्रशंसा गर्नुहुन्छ. यदि तपाईंलाई माछा मन पर्छ, तपाईं अलास्काको फिशिंग हबमा जान मौका पाउनुहुनेछ, होमर. यसबाहेक, तपाईं मरुभूमि छोड्न सक्नुहुन्छ र एन्कोरेजमा जानु सक्नुहुन्छ जुन अलास्काको सब भन्दा ठूलो शहर हो. जब तपाईं परिवार संग अलास्का भ्रमण गर्नुहुन्छ, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि तपाईं फेयरब्याksक्स र मतानुस्का ग्लेशियर पूर्ण दिन भ्रमणबाट आर्कटिक सर्कल डे टूर भ्रमण गर्नुहुन्छ।. यी दुई भ्रमणहरू तपाइँको अलास्का बिदा पूरा गर्दछ.
3. एरिजोनामा ग्रान्ड क्यानियन
वार्षिक रूपमा million० लाख आगन्तुकहरू पाउँदा पनि, भव्य क्यान्यन अझै पनि भ्रमण गर्नका लागि उत्तम ठाउँहरू मध्ये एक हो 2021. यो छ सब भन्दा लोकप्रिय स्थलचिन्ह संयुक्त राज्यमा र हरेक कोणबाट सुन्दर देखिन्छ. तपाईं यस क्षेत्रमा पर्वतारोहण जान सक्नुहुन्छ वा हवाई दृश्यबाट ल्यान्डस्केपको मजा लिन हेलिकप्टर सवारी लिन सक्नुहुन्छ. तपाईं घाटीको विपरित पक्षहरूबाट उत्तर र दक्षिण रिमहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ. धेरै व्यक्ति भ्रमण गर्न रुचाउँछन् ग्रान्ड क्यानियन राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिण रिम किनकि यो जाडो समयमा पनि सधैं नै खुला रहन्छ. तपाईं या त निजी रूपमा या मरूभूमि दृश्यको आनन्द लिन यस क्षेत्रमा टुर शटल बसहरू प्रयोग गरेर सडक ड्राइभ लिन सक्नुहुन्छ. ग्रान्ड क्यान्यनमा, तपाईं भन्दा बढि हेर्न सक्नुहुन्छ 447 त्यहाँ चरा प्रजातिहरू, राति उजाडस्थानमा शिविर, र राफ्टि like जस्ता रमाईलो गतिविधिहरूमा भाग लिनुहोस्. यस क्षेत्रमा, रमाईलो अवसरहरु अनन्त छन्!
4. सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा यात्रा मा 2021: क्रेटर लेक नेशनल पार्क
ओरेगन मा अवस्थित, क्रेटर तालले fifty। वर्ग किलोमिटर ओगटेको छ. ताल माजामा मा बसेको थियो जुन माथि बनेको थियो 7000 वर्ष पहिले विस्फोटले. योसँग नीलो पानी छ जसले आश्चर्यजनक प्रतिबिम्ब प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई चकित पार्नेछ. यो तालको सौन्दर्य यही हो तपाईं स्कुबा डाइभिंग जान सक्नुहुन्छ लगभग 2000 फिट को लागी यदि तपाइँ त्यस्तो मजाको कल्पना गर्नुहुन्छ. यस क्षेत्रमा तपाईंको यात्राको मजा लिन, लेकले प्रस्ताव गरेको सबै चमत्कारहरू पत्ता लगाउन तपाईंले तीन दिन खर्च गर्नु पर्छ.
5. डिज्नी वर्ल्ड
सूचीमा अन्तिम डिज्नी हो थिम पार्कहरू ओर्लान्डो र रिसोर्ट्स. यस मनमोहक ठाउँले सबै व्यक्तिहरूको लागि राम्रो जन्मदिन यात्रा गर्ने ठाउँ बनाउँदछ जो तिनीहरूको दैनिक क्रियाकलापबाट पूर्ण रूपले बग्दछ. यो विशेष गरी प्रमाणीकृत नर्सहरूको लागि सही हो जसले भर्खर पूरा गर्नुभयो NCLEX RN परीक्षा र एक रमाईलो छुट्टी को खाँचो छ. उनीहरूको लागि भाग्यशाली, वर्ष सुरु भएदेखि, धेरै जसो पार्कहरू फेरि खोलिएका छन् र व्यापारका लागि तयार छन्. यो कती लोकप्रिय छ भन्ने कुरा दिईयो, यस ठाउँमा प्राय: भीड हुन्छ त्यसैले तपाईंले आफ्नो भ्रमणको योजना बुद्धिमानीसाथ गर्नुपर्नेछ. तपाईंको बसाईको मजा लिन, तपाईं बारेमा रहन आवश्यक छ 6-7 दिन. केहि आकर्षणहरू जुन तपाईं कराउनुहुन्छld क्यारेबियनको समुद्री डाकूहरू समावेश गर्ने अभिप्राय, अरूमा पिटर पानको उडान.
6. सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा स्थानहरू 2021: भेनिस इटालीमा, युरोप
उत्तरपूर्वी इटालीमा अवस्थित, भेनिस यात्रुहरूका लागि हेर्ने दृश्य हो. यो भेनेटो क्षेत्रको राजधानी हो र बनेको छ 118 सानो टापुहरू नहरहरूले छुट्याएको. यी टापुहरू भन्दा बढी द्वारा जोडिएको छ 400 पुल. त्यहाँ कुनै सडक छैन, कुनै शोर ट्राफिक अर्थ. मानिसहरू नहरमा डु boats्गामा यात्रा गर्छन्, केही प्रभावशाली प्रदर्शनहरूका साथ आगन्तुकहरूको सेवा प्रदान गर्दै जुन अरू कतै देख्न सकिन्न. भेनिसलाई संसारकै सबैभन्दा अनौंठो शहरहरू मध्ये एक मानिन्छ, यसमा यात्रीहरू र फोटोग्राफरहरूको लागि शीर्ष गन्तव्यहरूको रूपमा सूचीत गर्दै 2021. यसबाहेक, भेनिसलाई यसको प्रकृतिमा अविश्वसनीय रोमान्टिक मानिन्छ. भेनिस सबैभन्दा धेरै सूचीमा पनि माथि छ सुन्दर शहर संसारमा. यो यसको अनौंठो नो रोड प्रस्तावको कारणले हो, प्रभावशाली पुरानो भवनहरू, र ऐतिहासिक तत्वहरू यसको निर्माण भर भेटियो.
7. सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा गन्तव्य 2021: ताल Baikal, रूस
विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश हुन, रसियासँग धेरै कुरा अफर छ समुद्री किनार सहित, पहाड, र ऐतिहासिक भवनहरू. तथापि, बैकल ताल धेरै यात्री र फोटोग्राफरहरूको लागि शीर्ष छनौट हो. यो संसारमा सब भन्दा पुरानो ज्ञात ताल हो, यो भन्दा बढि दावी गरेको धेरै रिपोर्टहरूको साथ 25 मिलियन वर्ष पुरानो. यो विश्वको सबैभन्दा गहिरा ताल पनि हो, को अधिकतम गहिराइमा पुग्न 1642 मीटर. अरु के छ त? बैकल विश्वको सबैभन्दा ठूलो ताजा पानी ताल हो. धेरै 20% विश्वको प्राकृतिक पानी यस तालमा बस्दछ. वरपरका लागि5महिना प्रति वर्ष, ताल बरफको बाक्लो तह अन्तर्गत कभर रहन्छ. तथापि, यो अझै सम्म गहिराईमा हेर्नको लागि सम्भव छ 40 मिटर यसको मुनि. वरपरका लागि 10 महिना प्रति वर्ष, यसको पानी बर्फीलो तापक्रम अन्तर्गत रहन्छ5डिग्री सेल्सियस. तथापि, अगस्त को महिना को आसपास, यसको तापक्रम बढ्छ 16 डिग्री सेल्सियस, यसलाई द्रुत पौडी र डिपहरूको लागि उत्कृष्ट बनाउँदै.
8. चीनको महान पर्खाल
यद्यपि चीन आज एक प्राविधिक रूपमा विकसित देशको रूपमा विकसित भएको छ, यो अझै पहिलो फेला परेको बेलामा यो आकर्षण र आकर्षण गुमाएको छैन. चीन को बारे मा धेरै कल्पना र रहस्यमय छ, तर ग्रेट वाल सबै रेटिंग्स र र्याकिंग मा शीर्ष छ. एक लोकप्रिय चिनियाँ भनाइ अनुसार, "उहाँ महान पर्खालमा नभएसम्म कोही पनि साँचो नायक हुन सक्दैन". को लम्बाई बाहिर विस्तार 6000 किलोमिटर, यो विशाल स्मारक यसको एक प्रकारको हो, र प्रत्येक यात्रीको लागि अवलोकन-अवलोकन नै हो. यसको औसत उचाई वरिपरि छ6गर्न 8 मीटर, तथापि, यो भन्दा बढि जान्छ 16 मिटर यसको चरम उचाई मा. यो पर्याप्त विस्तृत छ कि भन्दा बढी 10 यसमा हिड्नेहरू पनि सँगसँगै हिंड्न सक्दछन्. भित्तामा धेरै प्रभावशाली किल्लाहरू छन्, तथापि, सब भन्दा पुरानो मिति ईसापूर्व सातौं शताब्दी ई.पू.. महान पर्खाल एक पटकको जीवनकालमा अनुभव हो जुन कुनै पनि मूल्यमा मिसिन हुन्न.
8 सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा यात्रा मा 2021: निष्कर्ष
जब तपाइँ तपाइँको छुट्टी रद्द गरीएको हुन सक्छ 2020 महामारीको कारण, तपाईं अझै पनि यो यात्रा यस वर्ष लिन सक्नुहुन्छ. तथापि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तपाइँको मा बचत गर्न सबै चरणहरु लिनुभयो यातायात लागत. तपाईंले कम्तिमा केप कोडको भ्रमण गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ, अलास्का, ग्रान्ड क्यानियन, क्रेटर ताल, र डिस्नेवर्ल्ड. तपाईंको यात्राको मजा लिनको लागि आज तपाईंको यात्रा योजना सुरु गर्नुहोस्. हामी सकेसम्म रेलमा यात्रा गर्न रुचाउँछौं ताकि तपाईले पनि उत्तम हेराईहरू आनन्द लिन सक्नुहुन्छ.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई यी मध्ये एउटा योजना बनाउन सहयोग गर्न खुसी हुनेछौं 8 सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन यात्रा यात्रा मा 2021 रेल बाट.
के तपाइँ हाम्रो ब्लग पोष्ट "२०२१ मा Best उत्तम यात्रा स्थलहरू" तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, र तपाईं / fr लाई / ru वा / de मा परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ.
BestDestinations जन्मदिन कम्पास TravelDestinations TravelDestinations2021 TravelingDuringPandemic